डेटिङ जानुपर्ने पीरले शनिबार नआइदियोस् जस्तो लाग्थ्यो : आर्यन सिग्देल | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
डेटिङ जानुपर्ने पीरले शनिबार नआइदियोस् जस्तो लाग्थ्यो : आर्यन सिग्देल
Published On : २५ श्रावण २०७६, शनिबार १३:०५
अभिनेता आर्यन सिग्देललाई परिवारसँग समय बिताउँदा निकै रमाइलो लाग्छ । तर सिनेमाको व्यस्तताले उनी परिवारसँग त्यति धेरै समय बिताउन पाउँदैनन् ।
यतिबेला उनी सिनेमा ‘हजार जुनीसम्म’ को प्रमोशनमा व्यस्त छन् । ‘हजार जुनीसम्म’ साउन ३० गतेदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । आफैले निर्माण गरेको सिनेमा ‘कायरा’ प्रदर्शनमा आएको झण्डै एक वर्षपछि सिनेमा हजार जुनी सम्म मार्फत दर्शकसँग साक्षातकार गर्दै छन् ।
प्रस्तुत छ उनै अभिनेता सिग्देलले आफ्नो बाल्यकाल, युवावस्थासँगै सिनेमासँग जोडिएका रमाइला किस्साहरुका बारेमा गरेकोकुराकानीको सम्पादित अंश उनकै लयमा ।
‘हजार जुनीसम्म’ एउटा फूलको माला
कलाकार भएपछि सबैलाई राम्रो चलचित्रमा काम गर्ने रहर हुन्छ र यो स्वभाविक हो । आफूले गरेको काम दर्शकले मूल्यांकन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रत्येक पटक लाग्दो रहेछ । सुरु–सुरुमा त धेरै नै लाग्थ्यो पछिपछि केही कम भए पनि लाग्दै नलाग्ने भन्ने त हुँदो रहेनछ । ‘हजार जुनीसम्म’मा काम गर्न पाउदा एकदमै खुशी लागेको छ । एउटा राम्रो निर्देशकले बनाएको एउटा राम्रो चलचित्र हो ‘हजार जुनीसम्म’ । र त्यो चलचित्रमासबै राम्रा कलाकारहरुले नै अभिनय गर्नुभएको छ ।
हुन त नयाँ त्यस्तो केही छैन हाम्रो समाजमा हुने गरेका घटनाहरुलाई नै चलचित्रमा समावेश गरिएको छ । तर हजारौ फूलहरुलाई समेटेर, मिलाएर एउटा राम्रो माला बनाएको जूतै हो चलचित्र ‘हजार जुनीसम्म’ ।
कोठामा टीभी हेरेर एक्लै नाच्थेँ
बाल्यकाल मेरो थानकोटमै बित्यो । म सानैदेखि अलि फरक स्वभावको थिएँ । अहिले पनि त्यस्तै नै छु । मेरो आफ्नो छुट्टै कोठा थियो । म कोठा थुनेर बस्थेँ । डान्स गर्थे अलि–अलि । छुट्टीको दिन परिवारहरु सबै मिलेर सिनेमा हेर्न गइन्थ्यो । सिनेमा हेरेर त्यहाँको बाल कलाकारको अभिनय आएर घरमा गर्ने गर्थे । त्यस्तो ठूलो बदमासी गरेको भने छैन ।
घरमा भएको बेलामा सामान बिगार्ने कामहरु चाहिँ म धेरै गर्ने गर्थे । ममीले त्यस्तो पिटी हाल्नु हुँदैनथ्यो । बाबाले चाहिँ काम बिगार्यो की पिटी हाल्नु हुन्थ्यो । हाम्रो घर नजिकै एउटा भिडियो पार्लर हुन्थ्यो । एक दिन साथीले क्या रमाइलो हुन्छ हिँड् मिथुनको फिल्म आएको छ भन्यो । गएर सिनेमा हेरेँ बाबाले स्कुलबाट भागेर गएको कहाँबाट थाहा पाउनु भएछ । त्यो बेलामा बाबाको पिटाइ नराम्रोसँग भेटेको थिएँ ।
म पहिला बोर्डिङ्ग पढेको मान्छे पछि माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा आठ र नौ पढ्दा स्कुलमा फर्स्ट हुने मान्छे सेकेन्ड भएँ । सेकेण्ड भएपछि पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा पनि नबसी म घर गएँ । त्यो पछि घरमा आएर बाबाको पिटाई खाएँ । पिटाई खाएपछि ढोका थुनेर बस्ने मेरो बानी थियो । मैले बदमासी र चकचक गर्ने अवसर स्कुल पढ्दा खासै पाइनँ ।
मेरो सिद्धान्त पहिल्यैबाट कसैसँग पनि झगडा नगरौँ भन्ने नै थियो । अहिलेसम्म जीवनमा बुबा बाहेक कसैको कुटाइ खाएको पनि छैन कसैलाई पिटेको पनि छैन । सिनेमामा भने फाइट गर्ने, कुट्ने र अलिअलि कुटाइ खाने भएकै छ । मेरो विद्यालयको समय टेलिभिजन हेरेरै बित्यो । ढोका थुनेर डान्स गर्थेँ । तर अरुको अगाडि नाच्न मन लाग्दैन्थ्यो । क्यामरामा आएपछि थाहा छैन म कसरी खुल्न सकेँ । नत्र पहिला चाहिं एकदमै अप्ठ्यारो मान्ने मान्छे हो ।
एसएलसी दिँदाको खुशी
एसएलसी दिँदाको खुशी भन्दा पनि परीक्षा सकेपछि हामी साथीहरु सबै जना चार किलोमिटरको बाटो हिड्दैँ आएका थियाैँ त्यो निकै मज्जाको पल थियो जुन अहिले पनि याद छ । रिजल्ट आएपछि पास हुन्छु भन्ने थाहा थियो त्यही भएर त्यस्तो केही पनि भएन ।
अहिले त मलाई स्कुल जान पाएको भए कति मज्जा आउँथ्यो होला भन्ने हुन्छ । स्कुल पढ्दा मलाई मन पर्ने विषय गणित थियो । उत्तर सिधै आउँथ्यो त्यही भएर सजिलो लाग्थ्यो । साहित्यमा भने म लेख्न सक्दिन्थेँ । अरुले तीनचार पेज लेख्दा मैले बल्ल आधी पेज लेखेको हुन्थेँ ।
केटीले मन पराउँछे भन्ने थाहा पाएर स्कुल नै गइनँ
मलाई घुमाएर कुरा गर्न आउँदैन । मेरो स्कुल पढ्दा लभ परेन । कक्षा दशमा पढ्दा एक जनाले सुन न तँलाई त्यो केटीले मन पराउँछे भनेर भन्दिँदा म त्यसको तीनदिन सम्म स्कुल नै गइनँ । म त्यसरी भागेँ । ती केटीले मलाई हेर्थिन् । म पनि हेर्थेँ । म पनि राम्रै थिएँ उनी पनि राम्रै । राम्रो मान्छेलाई त हेर्न पाइयो नि ! उनको एसएलसी सकिएलगत्तै विवाह भयो ।
त्यसपछि मैले उनलाई अहिलेसम्म पनि भेटेको छैन । कक्षामा बस्दा मेरो बेन्चको तीनजना साथीसँग बोलचाल हुन्थ्यो । अरुसँग म खासै बोल्दैनथेँ । फेसबुकमा यसो सम्झिएको साथीहरुलाई खोज्छु तर म भेट्दिनँ ।
किशोर अवस्थामा डर मानी–मानी परेको त्यो लभ कस्तो होला ! आफै अन्दाज लगाउन सक्दिनँ । मलाई एकदमै डर लाग्थ्यो । प्लस टू मेरो विरेन्द्र सैनिकबाट भएको हो । त्यहाँको वार्डनले मलाई यो साइको हो कि क्या हो ! भन्थ्यो (लामो हासोँ) । म प्रायः एक्लै बस्थेँ । प्लस टूमा पनि लभ परेन मेरो त ।
मेरो पहिलो प्रेम भन्या जस्तो भएन । लभ भन्ने कुरा कहिल्यै परेन । एकपटक म एउटा अफिसमा जाँदै थिएँ । त्यहाँ जाँदाजाँदै अर्को अफिसको केटीले हेरिरहेको हुने सधैँ । हाम्रो हेराहेर हुन्थ्यो । हामी एक अर्कालाई हेरेर मुस्काउन थाल्यौँ । त्यसपछि उनले मलाई भेट्न बोलाइन् । म पनि गएँ । त्यहाँ हाम्रो नम्बर साटाटाट भयो ।
म एकछिनमा कल गर्छु अहिले ममी बाबासँग छु भनेँ । पछि म पनि फोनमा झुन्डिएर बस्न थालेँ । त्यसपछि एकछिन फोनमा कुरा भयो । अर्को चोटी भेट्न बोलाइन अनि मलाई आई लभ यू भनिन् । म त अलमल्ल परेँ । स्तब्ध भएँ । के भन्ने भयो । किन भने माया प्रेममा मेरो अनुभव केही पनि थिएन ।
पछि मैले हैन हामी त्यस्तो नगरौँ हामी मिल्ने साथी मात्र हौँ भने । त्यसपछि त उनी ग्वाँग्वाँ रोएर आई लभ यू भनिन् । ठिक छ ! ठिक छ ! आई लभ यू टू, आई लभ यू टू भनेँ अत्तालिएर (लामो हाँसो) । त्यो बेलामा मसँग जागिर त थिएन । उनी भने राम्रो ठाँउमा काम गर्थिन् ।
त्यो बेला उनीसँग राम्रो काम हुने आफूसँग त्यस्तो सारो पैसा नहुने । मैले अलि–अलि ड्रामा र स्टेज शो गरेर पैसा कमाउँथे । अनि शनिबार आयो कि डेटिङ्ग जाने तनावमा बस्थेँ । आफूलाई फेरि त्यो डेटिङ भनेपछि मरे जान मन नलाग्ने ।
पहिलो डेटमा जादाँ पनि चुप लागेर बसिरहेको थिएँ । कहिले समय सकिन्छ ! भनेर घडी हेरेर बसेको थिएँ । उनलाई मैले धेरै शनिबार काम छ भनेर टारेँ । तर पछि त्यो सम्बन्ध पनि टाढिँदै गयो । त्यसपछि कोही रोए पनि म आई लभ यू टू भन्दिन भन्ने भयो (लामो हासोँ) । त्यसपछि म यहाँ छु ।
साहित्यकार झमककुमारी घिमिरेको कृति ‘जीवन काँडा कि फूल’ मा आधारित चलचित्र यही कात्तिक २२ गतेदेखि
गोरखाको मकै बिहे वृत्तचित्रले जित्यो आदिम फिल्म क्रियटिभ पुरस्कार
गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा प्रचलित मकैबिबाह संस्कृतिमा तयार पारिएको वृत्तचित्र ‘मकै बिबाह’ पुस्कृत भएको छ
नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिबलमा गोरखाको मकैको बिहे पनि छनौट
गोरखाको लाप्राकमा प्रचलित मकै विवाह सम्वन्धी वृत्तचित्र नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिबलका लागि छनौटमा परेको
काठमाडौं : चर्चित र्‍यापर भिटेन पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले बिहीबार उनलाई